Iindibano ZamaNgqina KaYehova ZeNgingqi | JW.ORG
Indibano YamaNgqina KaYehova Ka-2020
Siyakumema ubukele indibano yamaNgqina KaYehova yeentsuku ezintathu. Ngenxa yecoronavirus (COVID-19) egcwele umhlaba wonke, indibano yalo nyaka iza kudlala ku-jw.org. Iintetho ziza kumane zifakwa ngoJulayi nangoAgasti.
IZINTO EZIZA KUBAKHO
NgoLwesihlanu: Uza kuva indlela abayeni, abafazi, abazali nabantwana abanokuvuya ngayo kwiintsapho zabo. Uza kuva nokuba izinto uThixo azidalileyo nendlela azenze ngayo zibonisa ukuba ufuna sivuye.
NgoMgqibelo: Kutheni amaNgqina KaYehova exelela abantu ngeendaba ezimnandi eziseBhayibhileni emhlabeni wonke? Iintetho, iividiyo neencoko eziza kubakho ziza kubonisa ukuba iBhayibhile ithi kutheni sishumayela size sifundise abantu.
NgeCawa: IBhayibhile ithembisa ukuba yintsikelelo kaThixo “etyebisayo, ibe akongezi ntlungu kuyo.” (IMizekeliso 10:22) Uza kumamela intshumayelo yeBhayibhile ethi “Unokuba Siso Njani Isityebi Ngaphandle Kweentlungu?” uze ucinge ngezizathu zokusithemba eso sithembiso.
Idrama YeBhayibhile: Inokukunceda njani indlela awayenesibindi nawayekhuthele ngayo uNehemiya ekuthethwa ngaye eBhayibhileni? NgoMgqibelo nangeCawa uza kubukela idrama yeBhayibhile eneziqendu ezibini ethi “Uvuyo Enilunikwa NguYehova Luza Kunomeleza.”​—Nehemiya 8:10.
AWUNGENI NGELOGIN IBE AKUFUNEKI UBHALISE
Jonga ucwangciso olupheleleyo, uze ubukele ividiyo ethetha ngeendibano zethu.
Ucwangciso Lwendibano Ka-2020
Text Iimpapasho onokuzikhuphela Ucwangciso Lwendibano Ka-2020